नेपाल भर्सेस ओमान, लगातार विकेट पतन, ज्ञानेन्द्र पनि आउट ! [LIVE] – Everest Dainik – News from Nepal
नेपाल भर्सेस ओमान, लगातार विकेट पतन, ज्ञानेन्द्र पनि आउट ! [LIVE]
काठमाडौं, भदौ १३ । मलेसियामा भइरहेको एसिया कप छनोटका लागि अहिले नेपाल र ओमान भिडीरहेका छन् । आजको खेलमा नेपालले खराब सुरुवात गरेको छ । उसले १७ ओभरको खेलमा महत्वपूर्ण ३ विकेट गुमाएको छ । पारस, सुवास र ज्ञानेन्द्र आउट भइसकेका छन् ।
लाइभ खेलको स्कोर हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्-
सुवास ४, पारस ८ र ज्ञानेन्द्र ४५ रनमा आउट भएका हुन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपालले १८ ओभरमा ३ विकेटको क्षतीमा ६४ रन बनाएको छ । क्रीजमा सागर पुन र दिपेन्द्रसिंह ऐरी छन् । नेपालले आज ५० रन पूरा गर्दा महत्वपूर्ण २ विकेट गुमाएको थियो ।
नेपाल ओमानसँग ६ पटक भिडेको छ । जसमा नेपालले सुरुका तीन खेल जितेको छ भने पछिल्ला तीनवटै खेलमा नेपालले पराजय बेहोरेको छ । छनौट प्रतिस्पर्धामा नेपाल र ओमानसँगै सिंगापुर, हङकङ, आयोजक मलेसिया र युएई छन् ।
नेपालले भदौ १४ गते युएई, १६ गते मलेसिया, १७ गते सिंगापुर र १९ गते हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । राउण्ड रोविन लिगका आधारमा हुने खेलमा शीर्ष दुई स्थानमा रहने टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । विजयी हुने टोलीले एसिया कपको समूह बी मा रहेर खेल्नेछ । यो समूहमा भारत र पाकिस्तान पनि हुने छन् ।
ट्याग्स: Asain cup, Gyanedra Malla, nepal vs oman, nepali cricket team